किन तपाईं एन्टीबायोटिक | चेकअप - औषधि जानकारी | अगस्ट 2021
औषधि जानकारी, समाचार घरपालुवा जनावर स्वास्थ्य शिक्षा चेकआउट समाचार कम्पनी, चेकआउट समुदाय, कम्पनी समुदाय, कल्याण समाचार, कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण कम्पनी, औषधि जानकारी कम्पनी स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार औषधि जानकारी औषधि बनाम मित्र
मुख्य >> औषधि जानकारी >> किन तपाईं एन्टीबायोटिकको साथ प्रोबियोटिक्स लिनु पर्छ
किन तपाईं एन्टीबायोटिकको साथ प्रोबियोटिक्स लिनु पर्छ
खराब ब्याक्टेरिया मार्न एन्टिबायोटिकले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। तर जब त्यसले संक्रमण नष्ट गर्दछ, यसले तपाईको पेटमा राम्रो ब्याक्टेरियालाई कोलेटरल नोक्सान पनि पुर्‍याउन सक्छ, जसको कारण केही दिन - वा हप्ता सम्म पनि औषधी लिन बन्द गरे पछि पखाला लाग्न सक्छ।
त्यसोभए तपाईं कसरी एन्टीबायोटिकको फाइदा पाउन सक्नुहुन्छ गन्ध पेट को प्रभाव बिना? जवाफ पाउन सकिन्छ प्रोबायोटिक्स -गोली वा पनि पाउडरप्रत्यक्ष सुक्ष्मजीवहरु संग स्वास्थ्य लाभ प्रदान गर्दछ।
तपाईको आन्द्रामा करिब १०० खरब ब्याक्टेरियाको साथ ब्याक्टेरियाका १,००० बिभिन्न प्रजाति हुन्छन्, भन्छ डा। लरेन्स होबरम्यान , अध्यक्ष र मेडिकल केयर इनोवेशन इंक का प्रमुख कार्यकारी। यदि bacteria०% ब्याक्टेरिया राम्रो, स्वस्थ प्रकारको छ भने, हानिकारक ब्याक्टेरिया खाडीमै रहन्छ। तर एन्टिबायोटिकले माइक्रोबायोममा सन्तुलन परिवर्तन गर्दछ, जसले हानिकारक ब्याक्टेरिया वृद्धि गर्दछ, उनले भने।
प्रतिरक्षा प्रणालीले नराम्रा मानिसलाई चिन्छ र तिनीहरूलाई नष्ट गर्न कोशिस गर्दछ। तर प्रक्रियामा, यसले आन्द्रा अस्तरको टुक्रा टुक्रा पारेर सूजन निम्त्याउँछ र हामी कसरी एन्टिबायोटिक सम्बन्धित डायरिया पाउँदछौं, डा। होबरम्यान बताउँदछन्।
एउटा अध्ययनले पत्ता लगायो कि एन्टिबायोटिक सम्बन्धित डाईरियाले patients% र patients%% बिरामीहरूलाई असर गर्छ, कुन एन्टिबायोटिक लिन्छ भन्नेमा निर्भर गर्दै। तर अनुसन्धानले देखाउँदछ कि प्रोबायोटिक्सले पाचन समस्याहरूलाई रोक्न सक्छ। Other 34 अन्य अध्ययनहरूको मेटा-विश्लेषण फेला पर्‍यो प्रोबायोटिक्सले एन्टिबायोटिक सम्बन्धित डायरियाको घटनालाई %२% ले घटाउँछ ।
यसैले डाक्टरहरूले प्राय प्रोबियोटिक्स लिने सल्लाह दिन्छन् जब तपाईंलाई एन्टिबायोटिक सिफारिश गरिएको हुन्छ — मात्र लिनुहोस् जब तपाईं तिनीहरू लिनुहुन्छ भने खाली ठाउँ छोड्नुहोस्।
[यदि सँगै लिएको छ] टीउनले एन्टिबायोटिकले प्रोबियोटिकमा राम्रो ब्याक्टेरिया मार्न सक्छ, डा। हूबर्मन भन्छन्। दुई घण्टा कुर्दै, आन्द्रामा प्रोबायोटिक वा एन्टिबायोटिक स्तर कम हुन्छ। यसले कुनै फरक पार्दैन जुन दुई घण्टाले अलग गरिएको छ भने पहिले नै लिन्छ।
कसरी तपाईं खमीर संक्रमण बाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ
उनले यो पनि जोड दिए कि तपाईको एन्टिबायोटिक कोर्स समाप्त भए पछि कम्तिमा एक हप्तासम्म प्रोबियोटिक्स लिनु जारी राख्नु महत्त्वपूर्ण छ।
तपाईं आफ्नो फार्मासिष्टलाई सिफारिसको लागि सोध्न सक्नुहुन्छ जुन यी मापदण्डहरूमा फिट हुन्छ।
सिंगलकेयर प्रिस्क्रिप्शन कार्ड पाउनुहोस्
एन्टिबायोटिक्सको साथ तपाई कुन प्रोबायोटिक्स लिनु पर्छ?
तपाईंको फार्मेसीमा सम्भवत विभिन्न प्रोबियटिक्सको बोतलहरूले भरिएका अलल्फहरू छन्। तपाइँ कसरी तपाइँको एन्टिबायोटिक संग सही प्रोबायोटिक छनौट गर्नुहुन्छ? डा। ब्रायन ट्रान, कोफाउन्डर DrFormulas , प्रोबियोटिकहरू खोज्न सिफारिश गर्दछ जुन तीन Ds हुन्छ:
खुराक: प्रोबायोटिकमा सक्रिय माइक्रो-जीवहरूको मात्रा उपनिवेश बनाउने इकाईहरू, वा CFU मा मापन गरिएको छ। तपाईं १० अरब CFUs वा उच्चको साथ एक खुराक चाहानुहुन्छ, डा। Tran भन्छन्।यो खुराक 1 x 10 को रूपमा उत्पादन लेबलमा देखा पर्न सक्छ१०।र जब तपाई १०० अरब वा बढी CFU को साथ प्रोबियोटिकहरू देख्न सक्नुहुन्छ, डा। हूबर्मनका अनुसार तपाईले २० अरब भन्दा बढी फाइदा पाउनु बन्द गर्नुभयो।
विविधता: प्रोबियटिक्सको बोतलमा रहेको लेबलले तपाईंलाई बताउनेछ कि कुन ब्याक्टेरिया क्याप्सुलमा हुन्छ। प्रोबियटिक्स खोज्नुहोस् जुनसँग १० देखि १० अनौंठो तनावहरू छन्। डा। ट्रान भन्छन्, एकल तनाव प्रोबायोटिकलाई बहु-तनाव प्रोबायोटिकसँग तुलना गर्ने अध्ययनले पत्ता लगाए कि विभिन्न किसिमका तनावहरू डायरिया कम गर्न अझ प्रभावकारी हुन्छ, डा। ट्रान भन्छन्।
मधुमेह को लागी ग्लूकोज स्तर के हो
ढिलाइ भएको विमोचन संयन्त्र: अन्तमा, प्रोबियटिक्स खोज्नुहोस् जुन ढिलाइ-रिलीज क्याप्सूल प्रयोग गर्दछ। जब तपाईं मौखिक रूपमा प्रोबियटिक्स लिनुहुन्छ, तपाईं तिनीहरूलाई आफ्नो पेट एसिडको पर्दाफास गर्नुहुन्छ र यसले पेटको लागि बनाउने प्रभावकारी खुराक घटाउँछ, डा। ट्रान भन्छन्। ढिलो रिलिज मेकानिजमको साथ प्रोबायोटिक्सले ती पेटमा जानु अघि सूक्ष्मजीवहरू रिलिज गर्दैनन्।
तपाईले एन्टिबायोटिक थेरापीको समयमा के खानुपर्दछ
र पूरक पदार्थहरूको साथ नरोक्नुहोस् prob प्रोबियटिक्स र प्रीबायोटिक्सयुक्त पदार्थ भएको खानाले तपाईंको पेटलाई मद्दत गर्न सक्छ। प्रिबायोटिकहरू उच्च फाइबर फूडहरू हुन् जुन तपाईंको शरीरलाई पचाउँदैन। जब उनीहरू तपाईंको पाचन मार्गको माध्यमबाट जान्छन्, तिनीहरूले त्यहाँ प्रोबायोटिक्स खुवाउँदछन्। अर्को शब्दहरुमा, यसले तपाईको पेटमा राम्रो ब्याक्टेरिया (प्रोबायोटिक) फलाउँदछन्।
जब तपाईं एन्टिबायोटिक लिनुहुन्छ, यो एक राम्रो विचार हो खाना खानु जुन दुवै प्रीबायोटिक्स र प्रोबायोटिकमा समृद्ध छन्।
यी प्रिबायोटिक समृद्ध खाद्य पदार्थहरू खाने प्रयास गर्नुहोस्, जस्तै:
पात कडू सागहरू, जस्तै डान्डेलियन साग, समुद्री शैवाल, र पालक
प्याज, लसुन र लीकहरू
रूट्स, जस्तै चिकोरी रुट र जीकामा रूट
यी सबै Bifidobacteria र Lactobacillus जस्तै लाभदायक ब्याक्टेरिया वृद्धि गर्न मद्दत गर्न सक्दछ।
त्यसो भए, तपाईंको आहारमा अधिक प्रोबियोटिक युक्त खाद्य पदार्थहरू थप्नुहोस्, जस्तै:
फ्रिमेन्ट फूड जस्तै कच्चा, अनपेस्टेराइज सौरक्रुट (पास्चराइजेशनले प्रत्यक्ष र सक्रिय ब्याक्टेरियाहरूलाई मार्दछ), टिम, र किम्ची
दही (प्रत्यक्ष र सक्रिय संस्कृतिहरूको साथ), केफिर, र छाछ (परम्परागत, संस्कृति नभएको)
अचार (काँक्रा नुनको पानीमा अचार र किण्वित; सिरका संग बनेको अचार को प्रोबायोटिक प्रभाव छैन)
यदि तपाईं पूर्व र प्रोबायोटिक फूडहरू तपाईंको भोजनमा समावेश गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंको एन्टिबायोटिकमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने खाना र पेय पदार्थहरूको बारेमा तपाईंको चिकित्सक वा फार्मासिष्टसँग डबल जाँच गर्न नबिर्सनुहोस्।
के म मेटफर्मिन लिँदा म रक्सी पिउन सक्छु?
Cialis खुराक, फारम, र शक्तिहरू
रक्तचाप तत्काल कसरी तल झर्ने
कसरी toenail फफस छिटो खाली गर्न को लागी
के म फ्लोनेजको साथ नाकको डिन्जेन्जेन्ट लिन सक्छु?
के हो tretinoin क्रीम 0.025 को लागी प्रयोग
एक मिर्गौलाको लागि सामान्य क्रिएटिनिन स्तर के हो
के तपाईं सिम्बल्टा र लेक्साप्रो सँगै लिन सक्नुहुन्छ